Poeta fidjiàna i Peter Sipeli, mitolona ho an’ny zon’ireo LGBTQ+ amin’ny alàlan’ny fitantaràna · Global Voices teny Malagasy
Katsahiny ny hamerenana mandinika indray ny fomba nandrafetana ny fitakiana.
Voadika ny 10 Marsa 2020 16:13 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Español, Português, Français, Esperanto , Italiano, English
Peter Sipeli nandritra ny kaonferansa TEDx iray tao Suva, Fidji. Loharano: Facebook
[Mankany aminà pejy amin'ny teny anglisy daholo ny rohy]
Peter Sipeli, poeta no sady mpikatroka, dia fantatra noho ny amin'ireo fotoana fandraisana fitenenana malalaka izay hafanainy mba hanomezana lanja ny zavatra sedrain'ireo olona LGBTQ+ ao Fidji. Natsangany ny fikambanana Poetry Shop Fiji, izay mikarakara famakianteny sy ‘slam’. Ity « tsena poetika » ity dia mamoaka ihany koa firaketana sy angona tononkalo, ary hatraminà asa soratra mirindra, tafiditra amin'izany ny an'ireo tanora ao Fidji.
Tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity, nifanaovana tanaty imailaka, dia hazavain'ilay poeta ny fomba fidiran'ny zavakanto ho ao anatin'ny asa fanentanana. Asiany teny ihany koa ny amin'ireo sedra lalovan'ireo mpanakanto sy mpikatroka ao Fidji, tamin'ny nanipihany ny filàna mamerina mandinika indray ny fomba fandrafetana fitakiana ao Oseania.
Nahamarika ihany koa izy momba ny fomba fanehoana amin'ny endrika maro ireo olan'ny fandrosoana, endrika tsy maneho manontolo ny zavatra iainan'ireo olona ao Polinezia. Ampian'i Peter Sipeli fa amin'ny ampahany dia tomponandraikitra ny fanavakavahana raha ny fanilikilihana manjo ny vondrompiarahamonina LGBTQ+ no resahana
Raha ny hevitro, ny olana sedrainay aty Fidji sy aty Pasifika amin'ny ankapobeny dia maha-tsy rariny sy efa tranainy ireo lalàna mifehy ny fiainan'ireo olona LGBTQ+. Ry zareo Britanika no nametraka ireny lalàna ireny, izay nolovainay taorian'ny fahaleovantena. Izany rehetra izany dia hita taratra, tsy hoe fotsiny any anatin'ireo lalàna eto aminay, fa koa any anatin'ireo idealy kristiàna izay miditra sy manadombo ny fanehoana ara-kolontsaina. Dia mamela anay miaraka amin'ny asa hampahatsiahy an'ireo vahoakanay hoe talohan'io « fifandraisana » io, nisosa be ny resaka ara-nofo teto aminay, ary marolafy ny resaka fironana ara-pananahana.
Hitan'i Peter Sipeli fa ny lova navelan'ny fanjanahantany no nanapaka ny fifaneraseran'ireo olona tao Pasifika :
Heveriko fa ny olana, izay na izahay eto Pasifika aza dia miatrika azy, dia ny hoe variana loatra miondrika miasa isika any amin'ny toerana misy antsika any ka tsy mba manopy maso mihitsy an'ireo olona mameno an'i Pasifika, Azia, ny any amin'ny lafintany hafa amin'ny tany ao Afrika sy any ambadika rehetra any. Tsy maintsy misy fomba fijery vaovao hahafahana mijery ireo fahaizamamorona artistika novokarina ho amin'ny tanjona fanovàna ny fiarahamonina, tsy hoe fotsiny mba hifankahafantarantsika, fa koa hifampianarantsika avy amin'ny tsirairay.
Ny fomba fiteny matetika rentsika ao Pasifika dia ny hoe « faritra Azia-Pasifika», nefa midadasika be i Azia ka tsy hitany akory isika. Voatsinjara ho faritra telo i Pasifika, izay ireo mpanjanatany no namorona izany : 1) ny Polinezia frantsay, lasa tsy hita idirana noho ny sàkan'ny fiteny ; 2) ny ilany avaratra amin'ny Pasifika izay nozanahan'i Etazonia ary tsy afaka ny ho hitantsika noho ny toerany ara-jeografika tena any amin'ny farany avaratra, saingy hay kely ihany ny tantaran-dry zareo amin'ny resaka nokleary; ary farany dia isika 3) Anglo-Oseaniàna. Tsy misy ifandraisany mihitsy ny zavatra ataontsika tsirairay… Misy dia misy tokoa ny rohy ara-barotra sy politika, saingy notapahan'ireo vahoaka any ny fifangaroharoana.
Ho fanarenana izany dia nampiasa ny kanto ity poeta sady mpikatroka ity mba handrafetana « fifampiresahana tsy mbola nisy toa azy sy mitodika kokoa amin'ny maha-olona momba ny zo, ny hirifiry ary ny fomba ahafahan'ireo Polineziàna hiasa mba hanentsenana ny hantsana noforonin'ireo mpanjanaka. » Tohizany :
Ny fahatsiarovana no hevitra iray ao ambadik'ity « fanentanana amin'ny alàlan'ny fitantaràna » ity. Ao Pasifika, raha milaza ny marina momba ny zavatra niainanao ianao ary manako amin-kery izay lazainao no sady maneho ny haavon'ny fivakisana anatin'io zavatra niainana io, mamboraka io zavamisy io aminà mpihaino avy amin'ny lafy maro, dia hanokatra ny masony ny olona, hahatakatra ny filàntsika sy ny tolona ataontsika hisian'ny fitoviana zo.
Resahan'i Peter Sipeli ny fomba nahatonga ny fitantaràna ho lasa fitaovana iray mahomby hiarovana ny zon'ireo LGBTQ+, fa tsy voatery hiankina fotsiny amin'ny fandresena lahatra an'ireo mpanao lalàna :
Matetika no manaraka tsipika mahitsy fotsiny ny fifanakalozandresaka momba ny zo, izay tsy mifanaraka afa-tsy aminà endrika tokan'ny ady ho amin'ny fitoviana : ny fitakiana ireny zo ireny amin'ny alàlan'ny hetsika iray mifamatotra amin'ny fanovàna araka ny lalàna sy politika. Tiako hitodika kokoa amin'ny maha-olona io fifampiresahana io ary hitantara ny hirifiry tsapantsika, io fanilikilihan'ny fiarahamonina io, hamaha ny zavatra rehetra mba hahafahan'ny olona mitondra ny fijeriny ao anatiny. Avelako ihany koa ilay resaka mba hahafahana miditra lalina any anatin'ireo Haisoratra, mamakafaka ireo andalana ao anatin'ny Baiboly izay mijoro manohitra ny fiarahan'ny olona mitovy taovam-pananahana, sy hanaisorana ireny endrika ireny eny anivon'ny vahoaka, mba hanombohana fifampiresahana iray vaovao momba ireo voasoratra ao anaty baiboly ka hahitàna izay fomba mendrika kokoa hiahiana ny olona.
Ambarany fa ireny fitantaràna ireny dia nisongadina ho « nitondra fiovàna» nandritra ireo fotoana nirahana nikarakara tamin'ny Ivontoerana fiatrehana ny krizy mba ho an'ireo vehivavy ao Fidji (FWCC) ary na dia ho an'ireo miaramila sy polisy aza :
Heveriko fa ny asako, tamin'ny alàlan'ny tononkalo sy ny fanentanana tamin'ny alàlan'ny fitantaràna, dia ny namoha làlana vaovao ho an'ny fifampiresahana ho any amin'ny famoronana vondrompiarahamonina tsara fandray kokoa an'ireo olona LGBTQ+.
Farany, itrikitrihan'ilay poeta ny filàna mandrafitra « fijery iray vaovao » ao Pasifika:
Inoako fa isika miaraka, ananantsika rehetra ny hetaheta hanana « fijery » iray vaovao hahafahantsika mahalàla, mitia, ary araka izany, mifanantona amin'ny maha-olombelona, isika tsirairay, amin'ny fomba tena miainga ao am-po lalina izay hahafahantsika mandingana ireo fanambaràna sadasada tsy marim-pototra.
Araho ny kaonferansa TEDx ataon'i Peter Sipeli momba ny fanentanana amin'ny alàlan'ny fitantaràna, ao anatin'ity lahatsary Youtube ity.